Gumii Gaayoofi Gumii Bokkoo – WAAQEFFANNAA
Gumiin abbootii Gadaa seeraafi sirnaan gaggeeffama. Gumiin Gadaa kora ykn yaa’ii abbootii Gadaafi gosaati. Gumiin abbootii Gadaan hogganame, gosa naannawa gumiin itti teessu jiran hundaa hirmaachisa. Gumiin kora abbootii Gadaa gosa gosaan kan gaggeeffamuudha.
Korri abbootii Gadaa gosaan gaggeeffamu kun, waggaa saddeet keessatti gumii (kora waliigalaa) ni waama. Gumiin Oromoo Boranaafi Oromoo Gujii biratti walga’ii olaanaa abbootii Gadaafi ummataa yoo ta’u, Oromoo kaan biratti ammoo Caffee ykn Yaa’ii Odaa jedhamuun beekama.
Gumiin Gaayoo bara Gadaa Abbaa Gadaa Daawoo Gabboo (1764) irraa kaasee, Oromoo Booranaatiif wiirtuu jilaa akka taa’eefi marsa gadaa 40fa akka keessummeesse dubbatama.